lost myself — MYSTERY ZILLION
February 2009 edited February 2009 in Blog
i can't tolerate! i don't know i can't tolerate whom or tolerate what.
maybe can't tolerate myself，
can't tolerate what i have done
can't tolerate what i am doing
can't tolerate what i am to do
can't tolerate everything of mine
before i was always self-confident，
i loved everything of mine,
loved my mature colour of skin
loved my character of humor
loved my excellent handwriting
loved my .........
I lost myself.but now i find i am very disagreeable，i
begin to hate myself
extremely，i find i am very ridiculous，i am crazy in emotion ,i don't
know what to do ,i don't know what to say,i don't want to write diary
these days,a lot of things happened to me ,but i don't know which to
speak of.my mind is out of order.i don't know how to make it peace but to
listen to the piano music of Rechard's again and again.
i lost myself in life again.i am out of control,likeaderial
train, what waiting for me
is just to hit with my head broken and bleeding.
နေရာမှားလာတာလားမသိဘူး။ ဘယ်လိုကြီးလဲ dvd ရောင်းနေတယ်ထင်တယ် ကျွန်တော့်အမြင်တော့.
ကျုပ်လည်းကြည့်နေတာ ဘာကြီးမှန်းမသိဘူး။ http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?p=31291#post31291 မှာလည်း ဒါမျိုးတစ်ခုတွေ့တယ်။ ရေးတဲ့လူက တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကိုယ်ပဲ အင်္ဂလိပ်စာညံ့လို့လားမသိဘူး သူဘာရေးထားတာလဲ မဖတ်တတ်ဘူး နားကိုမလည်ဘူး။:D ဘာတဲ့ "This isamust read book especially for Eric fans!!" ဘယ်လိုကို ဘာသာပြန်ရမှန်းမသိဘူး။
ဟုတ်သား....... DVD Collection က အလကားမှမပေးပဲ လိုချင်ရင်ကတော့ Exiter ဆီ အပူကပ်လိုက်တာပဲ ၀ယ်ရင် ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်
ကြည့်ရတာ MZ က Admin တွေ ကြောငြာတွေ ကို ထည့်ခွင့်ပြုပြီး လုပ်စားနေတာလားဗျ ကျွန်တော် တွေ့ တာနှစ်ခုရှိ။ မနေ့ကလဲ မေးထားသေးတယ်။ ဒါ နည်းပညာ forum လားလို့။
Wrong place. MZ is only နည်းပညာ forum.
mmfoxeye wrote: »
MZ Admin တွေ ကြော်ငြာထည့်ပြီး လုပ်စားပုံတော့ မရပါဘူး။
ဒီလိုပဲ Spam တွေ Ads တွေထည့်တဲ့ လူတွေက register လုပ်ပြီး ရေးပုံရပါတယ်။
Admin တွေ နည်းနည်း ရွေးချယ်စိစစ်ပြိး ဖျက် သင့်တာ ဖျက်ဖို့တော့ အကြံပြုရမယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကျွန်တော် နည်းနည်းမှနားမလည်ဘူးဗျ
ကျွန်တော် english စာမကျွမ်းဘူးဗျ ကျွန်တော် နည်းနည်းလေတောင်နားမလည်နိုင်ဘူး ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ bot ဝင်နေတာလား ??/